THE RECOVERY OF MOGADISHU IN PICTURES. - Page 3 - General - Somali Forum - Somalia Online
By biyo-cad, August 25, 2019 in General
Waa wareey, guryo si heersare ah loo dhisay. Intee Xamar kaga yaalaan? Darusalaam? I hope kuwa sawirka hoose ka muuqdo si condo u dhisan if it is individually sold that the owners pay maintenance fees in order to maintain the quality and security of their homes. Otherwise dhirkaas iyo quruxdaan kama sii muuqan doonaan if each dayaco.
This also reminds me haddaan gurigeena Xamar saan u dhisano. Waa lix boos, which can fit a lot of three-dabaq apartment, laamina saaran, xaafadda Hodan ku yaalo inta u dhaxeyso Isgoysyada Bakaaraha iyo kan Dabka.
Maasha-allah lix boos oo isku xiran laamina saaran oo degmada hodan yaalo
You talking million dollars worth of property.
Shirkada guryahan dhistay waa tan
Deserted streets of Mogadishu.
Shirkada korontada BECO
Area Warta-Nabadda, Jidka wadnaha.
Carwada Iidko ku taalay Jidka Sodonka, aaga Labadhagax ayaa soo xasuustay. Dharka ciidda ayaa aniga iyo walaalahey loogu soo gadi jiray dhamaadkii sideedameyadii. Cadnaan kuma soo gaarin carwadaas filaa.
Sxb this one looks much bigger than carwo idko maasha-allah kharash badan ayaa galay waxaan u rajaynayaa successful inuu joqdo.
Dagaalka markuu dhaceyey 10 jir ayaan ahaa waxaana daganeen jowhar
xamar waqti danbe ayaa imid 1993 after two 2 years waxaan soo aaday qurbo.
Carwada Iidko maba aadan arkin marka suuqaan iyo carwadaas mida weyn yaa kuu sheegay? Laba dabaq ayee ahayd iyo qeyb hoose. Koley Soomaaliya waagaas carwadaas u weyneyd.
Sheeko caan ayaa jirtay ninkii diiday in maqaayadiisa/biibatadiisa ka gado kuwii dhisan lahaa carwadaas Iidko. Dhulka inta kale ayee gadeen. Si walba lacag ugu sheegeen waaka diiday inuu ka gado. Carwada in si qaloocan loo dhiso ayee noqotay dukaankiina dhexda geeska ah ku yaalo. Waxaa la dhihi jiray waxee ku aadiyeen tubooyinkii biyaha roobka ka soo qaadaaye dabayada oo dukaankaas ayee ku dhici jireen markuu roob yimaado.
Waxa Xamar ku soo arkay toddobo bil ka hor is that almost every house's interior wall has bright fluorescent nalal sida luuqyada iyo jidadka kale mugdi u noqon. Marmar waxaaba isleedahay dowladda hoose maa ku qasabtay. I guess the fluorescent lights are energy efficient and hardly cost that much to run.